प्रेरक प्रसंग : महात्माको पासरमणिले फलाम छुँदा जब सुन बन्यो ! — Motivatenews.Com
काठमाडौं – एकजना महात्माले साहुलाई पारसमणि दिए । जुनले फलाामलाई छुनासाथ त्यो फलाम सुनमा परिवर्तित हुन्थ्यो । यो दिँदा महात्माले साहुलाई भने, ‘यो मैले तिमीलाई जम्मा सात दिनका लागि मात्र दिंदैछु । सात दिनपछि तिमीले मलाई फिर्ता दिनुपर्छ ।’
साहुले त्यो पारसमणि पाउनासाथ सोचे, ‘मेरो घरमा त हँसिया, चुलेसी कोदालो बाहेक केही पनि फलाम छैन । बजार जान्छु र धेरै फलाम किनेर ल्याउँछु अनि टन्न सुन बनाउँछु ।’ उनले थप दुइजना मान्छेलाई सकेजति फलाम छिटो किनेर ल्याउन भनेर ठूलाठूला सहर पठाए । उनीहरुलाई सहर पुग्नै दुई दिन लाग्यो । गाउँमा पुगेर फलाम झार्न पनि उतिकै समय लाग्यो ।
त्यहीँ पारसमाणिले फलामलाई सुन बनाउँ भने डाका लाग्नेडर, बरु घर लगेर लुकाउँछु र सुन बनाउँछु भन्ने सोचेर फलामलाई गाडामा हाल्न लगाए र घरतिर हिँडे । छ दिन त भैसकेको थियो यसो गर्दागदै अर्को दिन पनि बित्यो । पारसमाणि दिएको सातौ दिन भएकाले ती महात्मा पारसमणी फिर्ता लिन आइपुगिसकेका थिए । साहुले महात्मालाई घरमा आएको देखेर निकै आदरसत्कार गरे ।
महात्माले साहुसँग परिसमणि मागे । साहुले भने, ‘महाराज भरखर त फलामा किनें, एकछिन् पख्नुस् न ।’ अहँ ! म एकैछिन्् छोइहाल्छु नि ! अनि हजुरलाई परिसमणि दिउँला । ‘तिम्रो समय सकिसक्यो । मलाई त्यो लेऊ’ महात्माले भने । ल म यतिमात्र भए पनि छुन्छु भन्दै साहुले पारसमणी केहीमा छुनमात्र खोजेका थिए । महात्माले खोेसे ।
अतह मनुष्य, ससारमा मानिसले धर्मकर्मलाई यसरी विर्सेको छ की १ सेकेण्ड पनि समय दिदैन । जसले भोली भनेर टार्छ उ कहिल्यौ सफल हुँदैन । उसको लागि भोली कहिल्यौ आउँदैन । तसर्थ, समय रहँदै आफूले आँटेको काम पुरा गर्नुपर्छ ।